Iprofayile yenkampani | I-Zhongrong Technology Corporation Co, Ltd.
I-Zhongrong Technology Corporation Ltd (ikhowudi yesitokhwe: 836455), yasekwa ngo-1999 eyenye yamashishini amaTshayina aPhakamileyo-eTekhnoloji agxile kwiR & D, imveliso kunye nentengiso ye-ethanol engeyiyo ingqolowa kunye neemveliso zayo ezisezantsi. Yeyona mveliso inkulu ye-ethanol engeyiyo ingqolowa e-China, kunye nomvelisi omkhulu we-acetate eMantla e-China nase-North-East China. Iimveliso zithengisiwe kwiimarike zasekhaya kunye naseAsia, kumazwe aseYurophu ngengeniso yonyaka ye-USD150 yezigidi. Inenkampani zenkxaso-mali ezimbini ngokupheleleyo, iTangshan Zhongrong Technology Co, Ltd. kunye neZhangrong Technology Co., Ltd.
Sigxila kumacandelo oshishino lwee-biochemical, amayeza amayeza, iikhemikhali ezintle kunye namandla amatsha ngenjongo yokukhuthaza inkqubela phambili kwezentlalo ngokugcina inzululwazi ngokuzinzileyo kugxile kwi-R & D, kwimveliso, kwintengiso ye-ethanol engeyiyo ingqolowa kunye neemveliso zayo ezisezantsi nezisezantsi, kwaye uzinikezele ekubeni ngumthengisi okhuphisana kakhulu we-ethanol engeyiyo ingqolowa.
IZhongrong Technology Corporation Ltd iphethe iZiko le-R & D lePhondo eli-3 kwaye ifumene ngaphezulu kweshumi elinanye lempumelelo yesayensi nethekhinoloji engaphezulu kwamanqanaba aphambili asekhaya, kunye nangaphezulu kwamalungelo awodwa omenzi wechiza angaphandle angama-42. Kuluzuko olukhulu ukuba siwenzile iNkqubo yeTotshi yeSizwe kunye neNkqubo yeSizwe yeMveliso ePhambili. Siyinkampani yokuqala e-China ukuphuhlisa i-ethanol engeyiyo ingqolowa kunye nokwenza impumelelo kunye neepatent ezinxulumene noko. Sinolawulo oluphezulu kunye neetalente zetekhnoloji kwiiyunivesithi ezininzi ezidumileyo, kwaye siye saba ngumqalisi kunye nommeli wecandelo le-ethyl ye-ethanol yase China.
I-Zhongrong Technology yiyunithi yomlawuli olawulayo we-China Alcohol Association, iyunithi yomlawuli we-China Green Development Alliance, kunye ne-teknoloji kwishishini lokubonisa izinto ezintsha kwishishini le-petroleum kunye neekhemikhali zase China. Kule minyaka idlulileyo, siqokelele abathengi abasebenzisanayo bexesha elide kwaye senza inkqubo yokuthengisa ebanzi, engagubungeli ilizwe liphela, kodwa nokuthumela kwelinye ilizwe kwiimarike zaseAsia, zaseYurophu nase Mzantsi Melika. Ukongeza kwintengiso yesiko yokuthengisa i-Intanethi, inkampani ikwasayine isivumelwano sokusebenzisana kunye nemveliso enkulu yemichiza yokuvumela imveliso yenkampani ukuba isebenzele abathengi abaninzi. Siyathemba ukuba abantu abaneenjongo eziphakamileyo banokuba ngabaxhasi bethu
Ngokusekwe kwi-ethanol engeyiyo ingqolowa, sikhuthaza ukwakhiwa kweprojekhthi yokuvelisa i-ethanol sisebenzisa irhasi yomsila wensimbi, kunye nokuphuhlisa itekhnoloji yeselulosic ethanol, ukuqonda ukuphunyezwa kokushishina okunokwenzeka kwezoqoqosho, kunye nokukhulisa ukufikelela kwisigidi seetoni somthamo wemveliso yeethanol ngaphakathi Iminyaka 3-5. Kwangelo xesha, sisebenzisa igesi yomsila ukukhupha i-hydrogen, ukuphanda ngexabiso eliphezulu elongeziweyo lokusetyenziswa kwamandla e-hydrogen, kunye nokwakha isiseko samandla esicocekileyo.
Inkampani ijolise ikakhulu kwiindidi ezimbini zeendlela zetekhnoloji: iinkqubo zeekhemikhali kunye nezebhayoloji. Phakathi kwazo, imveliso yonyaka yeetoni ezingama-300,000 zezixhobo zokuvelisa i-ethanol esebenzisa i-gas yentsimbi, imveliso yonyaka yeetoni ezingama-15,000 ze-ethyl ethanol ebonisa izixhobo zisebenzisa i-biogas, kunye neetoni ezili-10,000 zezixhobo zezixhobo ze-hexane ezili-1,6 zixhobo zethu ezizimeleyo zobugcisa kule minyaka mihlanu idlulileyo.
Umthamo wemveliso yangoku: i-150,000 yeetoni ze-Ethyl Ethanol, iitoni ezingama-300,000 ze-Ethyl Acetate, iitoni ezingama-50 000 zoTywala obuTyiwayo, iitoni ezingama-15,000 ze-N-propyl acetate, iitoni ezili-10 000 ze-1,6-hexanediol, kunye neetoni ezingama-4000 ze-Enzyme.